Ukuhambisa isifuba, ewe okanye hayi? Nazi zonke izitshixo | Amadoda aQinisekileyo
Mhlawumbi uyazibuza ukuba ingaba licebo elilungileyo na elo cheba isifuba ejongene nehlobo okanye hayi. Xa ungathandabuzi malunga nokuba isifuba esitshiweyo sinomboniso olungileyo ngobuhle, singabekwa kwicala lethu, ndine-genetics. Ukongeza, mhlawumbi iinwele zesifuba zinokubiza kakhulu kwabanye abantu ukuba ufuna ukuyenza nge-laser okanye enye indlela eqinisekileyo.
Kule nqaku siza kukuxelela yonke imiba ekufuneka uyiqwalasele ukuze wazi ukuba awusithambisi isifuba sakho ehlotyeni.
1 Izinto eziluncedo zokuthambisa isifuba
2 Yonke into oyifunayo ukuthambisa isifuba sakho
3 Iimpazamo kunye notshintsho kwifashoni
Izinto eziluncedo zokuthambisa isifuba
Okokuqala kuko konke ukuba sazi ukuba akufuneki sithambe isifuba okanye hayi. Kukho abantu abajongeka bhetele benesifuba esineenwele kwaye abanye bengajonganga. Ihlobo sisihlandlo esifanelekileyo ukubonisa i-abs yakhe yensimbi kunye neepcs ezomeleleyo ukuba ungomnye wabo basebenza nzima kwindawo yokuzivocavoca. Zombini i-aesthetics kunye nokusikwa kwezihlunu kujongeka ngcono xa isifuba sichetyiwe. Ukuba ubusebenza kwimikhwa enzima bonke ubusika ekuhambeni kweenyanga, kuya kufuneka uyazi ukuba ulusu apho kukho iinwele ezincinci okanye akukho lunomtsalane ngakumbi kwabasetyhini, kwaye ngakumbi ukuba ngaba banezihlunu.
Zininzi izibonelelo zokuthambisa isifuba sakho. Kungenxa yokuba ayikhuli okanye uyacheba kuphela njengoko ikhula, iinwele ezisesifubeni azinangxaki. Oku akuthethi ukuba kuya kufuneka uyilahle. Ngokuqinisekileyo ukuba ukhe wanxiba ihempe ephezulu evulekileyo kwaye uneenwele kwisifuba esingaphezulu, uqaphele ukuba unika inkangeleko entle ngakumbi. Kukwanjalo nangabafazi abaninzi. Bakhetha isuntswana leenwele zesifuba xa bedibana nendoda.
Ukuba ungomnye wabo bantu baneenwele ezininzi, kuya kufuneka uthathele ingqalelo Kuya kuthatha umsebenzi omninzi ukususa zonke ezi nwele. Amanye amadoda akhangeleka emhle kunye neenwele zesifuba kwaye ziyinxalenye yobuntu bawo. Kuya kufuneka kuqala uchonge ukuba zingaphi iinwele ezikhulayo kwaye wazi ukuba zihambelana nobuntu bakho. Masibone ukuba zeziphi iindlela ezahlukeneyo esinokuthi sijongane nazo:
Unenwele encinci kodwa ayifikeleli kwinkaba: kule meko akukho mfuneko yokuba ususe iinwele ngaphandle kokuba uthathe isigqibo ngokwakho. Ukucheba kwanele ukuba iinwele zinde kakhulu okanye zishinyene.
Izinwele zikhula kuphela ecaleni kweengono: apha ukuba kunyanzelekile ukuba ulahle le nwele njengoko inokubonakala ingafuneki.
Unenwele embindini wesifuba kwaye ifikelela ezantsi esiswini: yenye yeendlela eziqhelekileyo zokuba neenwele emadodeni. Inokwahluka kuphela kubukhulu kunye nokuxinana. Ungabunciphisa ubude beenwele ngesitshetshe kwaye ucacise eyona ndawo ime nkqo. Kubalulekile ukuba ukhulule ihempe yakho kwaye ufumane ukuphakama okungaphezulu, ujongeka unciphile.
Imfumba emile ekhaphethi: Ukuba uyindoda engaphezulu kwama-40 kwaye usebenzisa isikere kuphela ukucheta iindevu zakho, akukho mfuneko yokuba ususe iinwele ngokupheleleyo ngaphandle kokuba ufuna njalo. Into ekufuneka uyenzile kukuyilolonga kwaye uyihoye ukuze ungalahli into yakho yobudoda endala.
Yonke into oyifunayo ukuthambisa isifuba sakho
Siza kubona yonke into oyifunayo ukuthambisa isifuba sakho. Ukuba uthe ekugqibeleni wafuna ukususa iinwele zesifuba sakho kwaye wonwabe ungasebenzisa iimveliso ezifanayo nezisetyenziselwa iindevu. Akukho nzima konke konke uku-wax esifubeni sakho, ukuba nje uyazi ukuba ungayenza njani kakuhle. Ukuba uza kususa yonke into ngokupheleleyo, kungcono usike ngesitshetshe kancinci kangangoko kwaye sigqibe kudala kakhulu. Sikwafumana konke okanye ubuncinci ukupasa. Kufuneka simanzise indawo esiza kuyicheba kakuhle kwaye emva koko sihlambe ibhafu eshushu ekunceda ukuba uphinde uchache. Ibhafu inokubekwa ngaphambili ukuze iinwele zichetywe ngcono. Faka isicelo sokucheba kunye nokucheba amagwebu ngokulinganayo kwicala lokukhula kweenwele.
Kuya kufuneka ukhumbule ukuba xa uthambisa kufuneka ujonge umzimba wakho. Kuya kufuneka uthathe ingqalelo kwisitayile ofuna ukusisebenzisa. Unokucheba iinwele ngokupheleleyo okanye ugqibe ukwenza isitayile. Ungayibumba kwaye uyichebe kwiindawo ezifana nesisu esisezantsi, ujikeleze iingono okanye isifuba ukuze ikhule kakuhle. Xa ugqibile ukuthambisa isifuba, kubalulekile ukuhambisa isikhumba kakuhle ukusukela oko iyathanda ukucaphuka ngokuthambisa iimpahla.
Iimpazamo kunye notshintsho kwifashoni
Ukunyuka kwamadoda kuye kwaba ngumcimbi onzima. Kude kube kutshanje, le ndoda yayihlala kamnandi kakhulu ngeenwele ezantsi emqolo. Phantse akukho nkxalabo yayihambelana nenani leenwele elinokuba nalo. Namhlanje, izinto zitshintshile. Ukunyuka kwamadoda kuye kwanda ngakumbi kwaye kukho iindlela ezininzi zokuthambisa isifuba, imilenze, amakhwapha, njl.
Uninzi lwamadoda oluye lwaxhuma luyenzile kwakhona. Ngale nto kukho indlela ebhalwe ngokwakho yokulungisa kunye nokuthambisa zonke ezi nywele. Konke oku kushiya inkululeko engakumbi xa ujonge isitayile sakho kuba unokuba nentshebe enkulu edibanisa kakuhle neenwele esifubeni.
Enye yeengcebiso ezinikwe ngakumbi kwabo bantu banokungazithembi xa kuziwa ekwazini ukuba sisinyithi isifuba okanye hayi kukucheba kakuhle kwaye ubumbe lonke ibele. Kwaye akulunganga ukuba zonke ezi zinwele zincamathele entanyeni yehempe okanye xa sifaka izinqumisi. Isitshixo kukuyinika ubume bobuhle obunokudibana kakuhle neendevu zethu.
Ndiyathemba ukuba ngolu lwazi ungazi kakuhle malunga nendlela kunye nokuthambisa isifuba sakho.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Amadoda aQinisekileyo » Ukunyamekela » Ukuhambisa isifuba, ewe okanye hayi?
Ndilithandile ibakala elihle kakhulu kodwa ndinamathandabuzo malunga nokuba kuya kuthatha ixesha elingakanani ukuba iinwele zesifuba zikhule kwakhona